မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အားပေးမည့် ဥပဒေမူကြမ်း အမေရိကန် အောက်လွှတ်?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အားပေးမည့် ဥပဒေမူကြမ်း အမေရိကန် အောက်လွှတ်??
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အားပေးကူညီရေးအပါအဝင် အချက်အချို့ပါဝင်သော Burma Act of 2018 ကို အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေး ရာကော်မတီက မေ ၁၇ ရက်တွင် မဲခွဲအတည်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း North East Now သတင်းဌာနကဆိုသည်။
ထိုဥပဒေမူကြမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး ပြောင်းရေး ဆက်လက်အောင်မြင် စေရေးအတွက် အားပေးရန်၊ စီးပွားရေးနှင့်လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ကူညီထောက်ပံ့ရန်စသည့်အချက်များ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ဘင်္ဂါလီအရေး၌ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့သူများကို တစ်သီးပုဂ္ဂလဆန်ရှင်များ ချမှတ်ရန်နှင့် ခရီးသွားခွင့်ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်လည်း ဥပဒေ မူကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက် ကျောက်မျက်ရတနာများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည့် မြန်မာကုမ္ပဏီများ၊ အမေရိကန်သို့ မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာများတင်သွင်း နေသည့်ကုမ္ပဏီများပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး တာဝန်သိသိလုပ်ကိုင် လာစေရေးအတွက် စည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်၊ ကျောက်မျက်ထုတ်လုပ် ရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့် အရပ်သားအစိုးရ အာဏာပိုမိုရရှိလာ ရေးဆောင်ရွက်ရန် စသည့်အချက်များကိုလည်း ဥပဒေမူကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြတိုက်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြည်တွင်းမှ ပြတိုက်များ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြ?
‘အဓိကကတော့ အားလုံးရဲ့ ညီညွတ်မှုကြောင့် ပရိသတ် အကြိုက်တွေ့ခဲ့တာပါ’ – ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်